Kuthetha ukuthini ukuphupha inamba? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Intsingiselo yokuphupha unenamba
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha inamba?
3 Iphupha lenamba ephaphazelayo
4 Ngenamba efileyo
5 Ngeedragons ezininzi
6 Ukuphupha ukuba ulwa kwaye woyise inamba
7 Ukuphupha ubhabha umva wenamba
8 Ukuphupha ngeNyoka kuyinto elungileyo okanye embi?
Intsingiselo yokuphupha unenamba
Ukuphupha ngenamba ayisiyonto imbi, ngokuchaseneyo, inokukubonisa abahlobo bayo bokwenyani. Uya kubona ukuba abantu abaninzi abakungqongileyo bayakuthanda kwaye bayakuthanda, kuba unako ukubaphembelela.
Ubukho bakhe bubagcwalisa ngethemba kwaye uninzi luya kwenza nantoni na ukubakhusela.
Ukuba uphuphe inamba oko kuthetha ukuba ungumntu onempembelelo kakhulu phakathi kwabahlobo bakho kunye nosapho. Abantu abakungqongileyo baya kuhlala befuna ukukhusela kuyo nayiphi na isoyikiso, kuba basebenze njengabagcini bakho.
Ukuphupha ngenamba kukwabonisa ukuba uya kukwazi ukufezekisa amaphupha akho kunye neenjongo zakho kwithuba elifutshane. Kungenxa yoko le nto nabani na ophuphayo ngabo kufuneka asoloko enombulelo ngeli phupha.
Ikwabonisa ukuba ungumntu onotyekelo olunomdla kwaye unokukhokelwa yintliziyo yakho kuphela. Kubudlelwane bothando kunokuba yingozi kwaye kukhokelele kukudana kothando.
Iphupha lenamba ephaphazelayo
Ukuphupha ngenamba kuthetha ukuba uya kuzifezekisa zonke iinjongo kunye namaphupha akho ngexesha elifutshane. Iya kuba lixesha lokugcina ukholo lwakho kwaye usebenze ngomonde omkhulu ukusombulula iingxaki zakho.
Iya kuba lixesha lemfazwe enkulu kunye nokuzimisela, oko kukuthi, isigaba apho kuya kufuneka ubonakalise ukubaluleka kwakho kuyo yonke into el mundo. Nangona kunjalo, wena kunye nabanye, kuya kubaluleka ekusebenzeni kwindaleko yakho.
Umzuzu okwazi ukusombulula yonke into oyifunayo, uya kuba nexesha elihle lokonwabela impumelelo. Iya kuba lixesha lokuhlaziya amandla akho kwaye ukonwabele usapho, izihlobo kunye nawe.
Ukuphupha ngenamba kuthetha ukuvula iindlela kwicandelo lothando, Oko kukuthi, lixesha lokonwabela. Ixesha liya kuba lilungele uxolelwaniso lothando kunye nokufuna unxibelelwano nabahlobo abakude kakhulu.
Ayinamsebenzi ukuba yafa njani le namba, kuba intetho ngokubanzi ayizukuhluka. Nokuba elinye iqela lingalunganga kangakanani na, lihlala lilixesha elifanelekileyo lokuba ubuyelane kwaye ulinike ithuba lesibini.
Ngokukodwa ngokunxulumene nothando, kuba uxolelwaniso lunokuhlala ixesha elide kwaye ithuba linokuhluka. Lixesha lokonwabela yonke into oyinikwa bubomi ngeli phupha.
Ukuba uphupha ngaphezu kwenamba enye, kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kubudlelwane bakho. Ukuba uhlala kude ixesha elide, ithuba lokwahlukana ngokuqinisekileyo likhulu kakhulu.
Kwezinye iintsomi zamandulo, iidragons zithetha ukhuseleko emadodeni, oko kukuthi, ukulala kunjalo. Ulumkiswa ukuba makenze into ukuze angalahlekelwa luthando.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ugcina ukusondela kwakho kwaye ngakumbi ilangatye lothando, ubudlelwane bakho buya kungena kwisigaba esihle kakhulu. Amaphupha eedragons ezininzi anokuthetha ukuba ixesha lobulumko liseza.
Ukuphupha ukuba ulwa kwaye woyise inamba
Ukuphupha ngokulwa nokoyisa inamba kuthetha ukuba nangona umlo umkhulu, uloyiso luza kuza kungekudala. Onke amaphupha akho, iinjongo kunye neenjongo zakho ziya kufezekiswa nguwe kube kanye.
Abachasi bakho baya kudibana nomntu omtsha kwaye uya kuba yimpumelelo, kuba uya kuyazi indlela yokulibamba eli thuba. Ngegazi njengokuba umlo wawunjalo, ukwazile ukuphumelela kwaye uphume uphakamisa intloko.
Kwaye okona kubaluleke kakhulu, baya kuba nethuba lokufunda kuwe, kuba ophumeleleyo uhlala efundisa ophulukeneyo. Awuyi kunyathela nabani na kwaye ungaphumelela nabahlobo kuhambo lwakho.
Ukuphupha ubhabha umva wenamba
Ukuphupha ukubhabha emqolo wenamba kuya kuba nentsingiselo ephindwe kabini, inokuba sisilumkiso sokuyeka ukukhokelwa ngumsindo. Nangona kunjalo, iya kusebenza njengesiqhelo sokuba uya kuba nakho ukusombulula iingxaki.
Kubalulekile ukuba ulandele ubomi bakho ngendlela eyahlukileyo kunye ne-toast ngeli xesha litsha. Nokuba yeyiphi indlela uya kuba nethuba lokoyisa zonke iingxaki zakho.
Ukuphupha ngeNyoka kuyinto elungileyo okanye embi?
Kuzo zonke iinkcazo bekunokwenzeka ukuba kuqondwe ukuba ukuphupha ngenamba kuyinto elungileyo. Ngohlalutyo olunzulu kuya kugqitywa ukuba olu hlobo lwamaphupha lusebenza njengesilumkiso. Bayasikhusela kangangokuba banokusilumkisa xa kufuneka sitshintshe, sibe nomonde, kwanokuba sinike ingqalelo.
Njengokuba iphupha linokubonakala lisoyikeka, kubalulekile ukubambelela kwintsingiselo yalo ulibale konke. Ukulandela ukholo kunye nokusebenzisa amathuba kuhlala kusisilumko kakhulu kuyo nayiphi na imeko. Unoyolo lowo unokukholelwa kwaye asebenze kuguquko lobomi bakhe bebonke.